Heroes of Might and Magic II 0.9.10 dia efa nivoaka ary ireto ny vaovao | Ubunlog
Vitsy vitsy lasa izay ny fanambarana momba ny fisian'ny ny kinova vaovao amin'ny tetikasa mahery fo2 0.9.10, version izay nisy fiovana lehibe natao, izay misongadina fa ny version SDL2 izao dia manohana ny V-sync, ankoatry ny fanovana hafa.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Heroes of Might and Magic II 0.9.10
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Heroes of Might and Magic II 0.9.10
Amin'ity kinova vaovao ity dia nasongadina izany Ny dikan-teny SDL2 dia manohana ny V-sync mba hanafoanana ny flickering amin'ny mpanara-maso mpampiasa sasany.
Zava-baovao iray hafa misongadina dia ny passability akaikin'ny ranomasina zavatra, Ary koa amin'ny fampiasana ny ody "Dimension Door", ankehitriny dia mitovy amin'ny tany am-boalohany, ankoatr'izay avy amin'io dikan-teny io dia azonao atao ny misafidy ny fitenin'ny lalao eo anelanelan'ny Anglisy, Alemana, Frantsay ary Poloney rehefa manomboka fheroes2 fotsiny. iray amin'ireo toerana ireo.
Ankoatra izany, manana ny cfahafahana milalao horonan-tsary kely eo amin'ny efijery fifantenana fanentanana "Ny vidin'ny tsy fivadihana."
también dia asongadina fa nisy script nampiana mba hanesorana loharanon-karena avy amin'ny lalao ny DOSBOX version an'ny Heroes of Might and Magic 2 ary ao amin'ny AI ihany koa dia voavaha ny olana amin'ny fikorontanan'ny eddies sy ny tsy fahafahany miankandrefana.
Lahatsoratra afovoany amin'ny fikandrana interface tsara sasany.
Fanehoan-kevitra raikitra ny grid eo amin'ny sehatry ny ady.
Ny mahery fo dia aseho amin'ny minimap (tsy toy ny tany am-boalohany).
Namboarina ny lojika amin'ny fitadiavana ny lalanao amin'ny sarintanin'ny aventure sy ny kajy ny sazy amin'ny fifindrana any amin'ny faritra malalaka.
Namboarina ny bug mihoatra ny 60 avy amin'ny kinova farany.
Avelao hanova ny hafainganam-pandehan'ny ady amin'ny fampiasana kodiarana totozy
Amboary ny toeran'ny varavarankelin'ny fanangonana biby ho an'ny toerana maro
Amboary ny lojika amin'ny fampiasana AI miadana sy maimaika mandritra ny ady
Ampio hafatra famantarana kisendrasendra
Amboary ny haavon'ny mozika sy ny feo ambony indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Heroes of Might and Magic II 0.9.10 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao